I-Kickdynamic: Okuqukethwe kwe-imeyili okwenziwe ngokwezifiso kuvuliwe | Martech Zone
I-Kickdynamic: Okuqukethwe kwe-imeyili okwenziwe ngokwezifiso kuvuliwe
NgoLwesithathu, Januwari 14, 2015 NgoLwesithathu, Januwari 14, 2015 Douglas Karr
Eminyakeni eminingi edlule ngenkathi sisebenzela umhlinzeki wesevisi we-imeyili okhulayo, sisebenzise izifunda zokuqukethwe ezinamandla emikhankasweni ye-imeyili yamakhasimende ethu. Ungashintsha okuqukethwe ngokuya ngemininingwane oyiphathele obhalisile. Ingxenye enzima ukuthi imininingwane kwakudingeka ukuthi ibhucungwe futhi ingeniswe ngenqubo eyisicefe. Imithetho yokuklama kusifanekiso bekungelula futhi. Ngesikhathi uthumela i-imeyili, okuqukethwe bekusethiwe.
Sasinomthengisi oyedwa wezokuvakasha owayenesifanekiso esasinemithetho engamakhulu amaningana emkhankasweni. Cishe bonke ababhalisile babene-imeyili eyenzelwe wena eyi-100%. Izinga labo elivulekile nezinga lokuguqulwa linyuke kakhulu.
Uma uthumela i-imeyili ye-HTML, umbhalo uyathunyelwa kepha izithombe ziyacelwa kuphela uma obhalisile ivula i-imeyili. Lokho kunikeza ithuba eliyingqayizivele lokwenza okuqukethwe kwe-imeyili kususelwe ekutheni obhalisile ukuphi nokuthi benzani kunedatha ephathelene nokuqoshwa kwabo.
Kickdynamic isevisi ye-imeyili ekuvumela ukuthi wakhe ama-imeyili ashukumisayo, enziwe abe ngewakho aguqula okuqukethwe ngesikhathi kuvulwa i-imeyili! Nazi izibonelo ezimbalwa:
Indawo - Kuthiwani uma ngivula i-imeyili esondele kakhulu kwesinye sezitolo zakho eziningi esifundeni? Ungaveza isithombe sesitolo engiseduze kakhulu ngaso nendawo nendawo.
Idivayisi - Uma ngikuselula, ungahle ufise ukuhlinzeka ngokusondeza isithombe ngokucace kakhudlwana, noma ukunikezwa okuqondene neselula.
uhlelo lwezikhathi - Uma nginomncintiswano nge-countdown, isikhathi esisele emncintiswaneni singakhonjiswa ngesikhathi sokuvulwa.
Weather - Mhlawumbe kunesiphepho esingena futhi ufuna ukukhuthaza imikhiqizo ethile uma lina.
Social - Mhlawumbe ngifuna ukuhlanganyela izibuyekezo zami zakamuva zokuxhumana nomphakathi!
Umakhi womthetho weKickdynamic ngumkhiqizo onamandla okuvumela ukuthi usebenzise imithetho yokuvulwa komamukeli evulekile ngokuya ngesimo sezulu, idivaysi, usuku / isikhathi, indawo yokuzivumelanisa, nokwandisa nokubuyekeza izithombe ngesikhathi sokuvula. Ungasebenzisa umthetho wokwakha ukudala imithetho elula, noma usebenzise izici ezithuthukile ukuthola okwengeziwe ngenjini yokubusa isikhathi esivuleke ngokuphelele.
Inothi elilodwa lobuchwepheshe kulokhu ukuthi uma i-imeyili isivuliwe futhi isithombe sesithunyelwe… uvalelwe kulowo mfanekiso othunyelwe. Abanye abahlinzeki bezinsizakalo ze-Intanethi namanye amaServer e-imeyili (njenge-Exchange) alondoloze izithombe zasendaweni kuseva. Ngakho-ke uma uthathe isinqumo sokwenza ushintsho ngemuva kokuthi obhalisile evule i-imeyili, bazothola isithombe esifakwe kunqolobane.
Senze izivivinyo ngalezo zinsuku zokuqala lapho sasithumela khona okuthunyelwe kwethu kwakamuva kwebhulogi (umbhalo obekwe kusithombe sangemuva) kepha njengoba i-URL yokucela isithombe ingashintshanga kusuka ku-imeyili iye ku-imeyili, isithombe esifanayo besilokhu sivela. Njengoba ungeke ushintshe indawo yesithombe endizeni ku-imeyili ye-imeyili okuyiwa kuyo, awukwazi ukubuyela emuva ubuyekeze isithombe.
Kusalungile impela lokho Kickdynamic igxile kulezi zinhlobo zokuqukethwe okwenziwe ngesikhathi sangempela ku-imeyili. Kanye nokuhlolwa kanye analytics kungxenyekazi yabo, kubukeka sengathi banesixazululo esinamandla sama-imeyili enziwe waba ngewakho.
Tags: i-imeyili enamandlaokuqukethwe kwe-imeyili okunamandlaimeyiliKickynamicokuqukethwe komuntu uqobo
I-TrendSpottr: Shintsha Umsindo Womphakathi Wenze Izimpawu Zokuqala Ezisabekayo
Ama-Supermetrics: Thola Yonke Idatha Yakho Yezibalo ku-Google Amadokhumenti noma ku-Excel